Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo Muqdisho ka bilaabmatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada xildhibaanada aqalka hoose oo Muqdisho ka bilaabmatay
November 30, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Sanduukha doorashada Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada lagu soo xulayo xildhibaanada qabiilooyinka Banaadiriga iyo Somaliland umatali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ka bilaabmatay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Doorashada aqalka hoose ayaa ka bilaabmatay maamul goboleedyada Soomaaliya bilowgii bishaan, walina lama soo gunaanadin hanaanka doorashada.
Ilaa iyo hadda 170 xubnood oo aqalka hoose ah ayaa la doortay. Xildibaanada aqalka hoose ayaa ka kooban 275 xubnood.
December 13, 2016 Xasan Shiikh oo sheegay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka uu dhici doono 15-ka December
March 4, 2017 Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo loo dhaarshay xubinimada baarlamaanka